मनोरंजन – Krazy NepaL
बिगत लामो समयदेखि सामाजिक संजालमा नायक पल शाह र गायिका समिक्षा अधिकारिको नाम जताततै फैलिएको थियो । उनिहरुको सम्बन्धलाई लिएर दर्शकहरुले अनेकौ ति”ता”मि”ठा टिकाटिप्प्णी पनि गर्दै आएका थिए । उनिहरुबिच प्रेमीप्रेमिकाको सम्बन्ध रहेको भनेर जताततै गा”इ”गु”इ ह”ल्ला चलिरहँदा गायिका समीक्षा अधिकारीले अचानक आफूलाई अभिनेता पल शाहले आफूलाई सुरुमा फकाएर माया देखाएको र अहिले छाड्न खोजेको आ’रो’प लगाएकिछिन । ‘पहिले माया गर्छु भन्दै पछि लागेर आफ्नो हेरचाह गर्दै मायामा फसाए’ गायिका अधिकारीले भनिन्, ‘अहिले भने मसँग टाढा हुन खोजिरहेका छन् ।’ टिसि नेपालले सार्वजनिक गरेको एक अडियो अन्तर्वार्तामा समीक्षाले पलसँगको सुरुदेखि अहिलेसम्मको वि’वि’ध कु’रा खोलेकी छन् । जसमा उनले पलसँगको प’हि’लो भे’ट’देखि पछिल्लो समयको बिभिन्न परिस्थितीका बारे सबै कुरा सहज रुपमा राखेकी छन् । पहिलो पटक पोखरामा म्युजिक भिडियो सुटिङमा आफूल
नायक पल शाह गायिका समिक्षा अधिकारीसँगको लफडामा परेपछि यसका सम्भावित साइड इफेक्टले बजार तातेको छ । यो स्क्यान्डलबाट नायिका पुजा शर्मा समेत तनावमा छिन् । पुजाले निर्माण गरेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ आउँदो १३ फागुनमा रिलिज हुँदैछ । कोरोनाका कारण यो चलचित्रको रिलिजमा करिब दुई वर्ष ढिलाई भएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहर साम्य भएर चलचित्र घरहरु खुलेसँग रिलिजको नयाँ डेट तोकिएको हो । पुजा शर्मा चलचचित्रको पब्लिसिटीका लागि निकै मिहिनेत गरिरहेकी छिन् । चलचित्रका नायक पल शाहलाई साथमा लिएर केही दिनदेखि उनी पब्लिसिटीमा दौडिरहेकी थिइन् । अहिले पल शाह विवादमा मुछिएपछि पुजालाई तनाव भएको हो । कलाकारका स्क्यान्डलले कहिले फिल्मको व्यापारलाई मद्दत गर्छन् त कहिले हानी पुर्याउँछन् । कतिपय चलचित्रका निर्माता–निर्देशकले फिल्म रिलिज हुँदा चर्चाका लागि बनावटी स्क्यान्डल पनि खडा गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रबासमा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गित क्षेत्रलाइ असाध्यै माया गर्नुहुने सोनाम लामा योन्जन हाल पोर्चुगलमा रहँदै आउनु भएँको छ । लामो समय पछी फेरी वहा आफ्नो नयाँ साङ्गेतिक कोसेली लिएर छिटै नै नेपाली सङ्गित क्षेत्रमा आफ्नो पुनरागमन गर्दै हुनुहुन्छ । जसमा सङ्गित अहिलेका निकै नै चर्चित सङ्गितकार टिका बोम्जनको रहेको छ । लामा तामाङ समाज पोर्चुगल का पुर्ब अधक्ष्य समेत रहुनु भएँको थियो ।र छिटै नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ।निकै नै पुरानो स्रष्टा लामालाइ क्रेजी अनलाइन मिडियाको तर्फवाट बधाई तथा शुभकामना छ।
काठमाडौं – आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रबाटै अत्याधिक चर्चा पाए।अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतबाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए। १७0 बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका हमाल पछिल्लो समय अभिनयमा त्यति सक्रिय छैनन्। एक समयका सर्वाधिक चर्चित नायक मानिने हमालका तारिफ पाउने खालका चलचित्र सार्‍है थोरै छन्। केही महिलाहरुसँग उनको नाम जोडिएपनि उनको प्रेमप्रसंगको चर्चा त्यति भएन। ५० वर्षको उमेरमा उनले मोडल मधु भट्टराईसँग प्रेमविवाह गरेका थिए।सानैबाट सुख सयलमा हुर्केका हमाल खासै पैसाको उनले दुख गर्नु पर्ने अवस्था थिएन। किनकि उनी राम्रो आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा थिए। पहिला वर्षमा एक पटक घुम्नलाइ अमेरिका र बेलायत जाने हमल अहिले भने
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धले फिल्मी बजार तातेको छ । उनीहरुको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको सनसनीपूर्ण खुलासा नेपालको एक चर्चित अनलाइन न्यूज पोर्टलले गरेको छ । नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो केही समयदेखि मिडियासँग भागिरहेका छन् । उनीहरूको डर एउटै छ, आफूहरूबीचको अन्तरंग सम्बन्धबारे सोधिनसक्ने प्रश्न ।करिब दुई महिना अघिदेखि समीक्षा र पलको ‘प्रेम प्रकरण’ बारे कलाकारिता क्षेत्रमा चियोचर्चो सुरू भएको थियो । तर, सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको थिएन । अब भने यो विषय लुकाएर लुक्ने अवस्था रहेन । उनीहरू दुवैले बोल्न नचाहे पनि वा अस्वीकार गरे पनि एक–कान दुईकान हुँदै छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको छ ।हिजो एक राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने फिल्मी कार्यक्रममा उनीहरूको सम्वन्धबारे प्रश्न उठाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरिरहेका छन् । दुवैजना पब्लिक फिगर भएको हु
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली सिने जगतमा दुई कलाकार चर्चाको शिखरमा छन्। ती हुन् नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी। उनीहरुबीच प्रेमको मात्र चर्चा चलेको भए धेरैलाई सामान्य लाग्थ्यो होला। किनकि पलको नाम उनले काम गरेका अधिकांश अभिनेत्रीसँग जोडिन्छ। तर कुरो अर्कै आएको छ। पलले समीक्षालाई छोड्न खोजेपछि समीक्षा रिसाएकी र उनले धम्कीसमेत दिएको हल्ला चलेको छ। समीक्षाले पललाई यदि आफूसँगको प्रेम सम्बन्ध स्वीकार नगरे आफूसँग रहेका फोटो–भिडियोहरू बाहिर ल्याइदिने र पुलिस केससमेत गर्ने भनी धम्की दिएको उनीहरु निकट स्रोतको दाबी छ। दर्शकमाझ रियल हिरोको छवि बनाएका पल त्यसबाट झस्किए। त्यसपछि समीक्षाको आफन्त पर्ने एक पूर्वगृहसचिवको रोहबरमा उनीहरूबीच विवाहको मौखिक समझदारी भएको बताइएको छ। त्यतिमात्र होइन दुई परिवार र पत्रकारको उपस्थितिमा लिखित समझदारी पनि भएको चर्चा चलेको छ। दुई वर्षपछि समीक्षा बालिग
काठमाडौँ । साउथ फिल्मका चर्चित नायक नागा चैतन्य र नायिका सामन्था रुथ प्रभु अन्तत एकअर्कासँग सँगै नबस्ने भन्दै छुट्टीएका छन् । उनीहरुको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेसँगै अनेकन अड्कलबाजीहरु भएका बेला उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको प्रमुख कारण सामन्था पछिल्लो समय फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकरसँगको सम्बन्ध भएको बताइएको छ । यो जोडीको डिर्भोस हुनुको खास कारण फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकर नै भएको भारतीय मिडियाहरुल्े दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि नागाको परिवारले सामन्थाले अभिनयलाई छोडेर पारिवारिक जीवन बिताउन दबाब दिइरहेका कारण सामन्थाले डिर्भोसको निर्णय लिएको बताइएको थियो । गत सातामात्र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरु अलग्गिने निर्णय लिएका थिए । सामन्था र नागाको यो निर्णयले सामन्थाका पिता जोसेफ र नागाका पिता तथा अभिनेता नागार्जुनले ‘दुःखित’ बनेको बताएका छन् काठमाडौँ । साउथ फिल्मका चर्चित नायक
१७ नेपाली हिरोइनको रियल जोडी: कसको श्रीमान के गर्छन् ?
एक महिला र एक पुरुष लगनगाँठो कसेपछि सात जन्मसम्म साथ नछाेडिने मान्यतामा रहेर जोडिने सम्बन्ध नै बिवाह हो । नेपाली नायिकाहरुको लगनगाँठो केहीको फिल्म क्षेत्रका र केहीको फिल्म क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिसँग विवाह भएकाे हामिले देखेका छाैँ ।नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केहि त्यस्ता नायिकाहरू छन् जसले विवाह पश्चात् सिने क्षेत्रबाटै पलायन भए तर केहीले मात्र यस क्षेत्रलाई निरन्तरता अघि बढे । धेरै बिवाहित जाेडीमा कयौं सम्बन्ध लामो समय टिक्न नसकेपछि सम्बन्धविच्छेदसम्म भइरहेकाे हामिले हाम्रै समाजमा देखेका छाैँ । त्यस्तै सिने क्षेत्रकै व्यक्तिसँग लगनगाँठो कस्ने नेपाली नायिकाहरूमध्ये केहीले विवाहित पुरुष रोजेका छन् । विपना थापा विपना थापा उनले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी हुन् । उनको श्रीमान् आशुतोष भारद्वाजको पेशा भने सिनेमा पनि बनाएका थिए । उनीहरूकाे एक छोरा छन् । विवाहपश्चात् उनी पूर्णतया हाउसवाइफ
गायिका इन्दिरा जोशीले केही दिन अगाडि आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरिन् । उनका प्रेमी शरद केडियाले उनलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेरै बिहेको प्रस्ताब राखे । इन्दिराले पनि सहर्ष शरदको प्रस्ताव स्विकार गरिन् ।उसो त, इन्दिराले केही समय अगाडि नै आफू प्रेममा रहेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । ३ बर्ष अगाडिको भेटघाटलाई इन्दिरा र शरदले प्रेममा बदलेका हुन् । उनीहरुले बिहेको तयारी नभएपनि इन्गेजमेन्टका लागि भने कुराकानी भैरहेको बताएका छन् । प्रेमी सार्वजनिक नगर्दासम्म इन्दिरा शरदसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा कम पुग्ने गर्थिन् । पुगी हालेपनि उनी र शरद क्यामेराको अगाडि खुल्दैनथे । तर, शरदको बिहे प्रस्ताव स्विकार गरेपछि भने इन्दिरा अब प्रेमको यात्रामा निष्फिक्री रुपमा घुम्ने मुडमा छिन् । काठमाडौंमा अत्यतै दुखदायी घट्ना, ३ पुरुषको मृत्यु काठमाडौँ उपत्यककाको विभिन्न स्थानमा तीन जना मृत भेटिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार
नायिका प्रियंका कार्कीको गर्भवती अवस्थाबारे मिडियामा अनगिन्ति गसिपहरु आए । सोसल मिडियामा दिनहु ट्रोलहरु बने । आज उनले छोरीको जन्म दिएकी छन् । धेरैलाई लागेको छ, बच्चा जन्माएपछि उनको चर्चा केही समय थामिएला । तर, त्यस्तो छाँट देखिँदैन । छोरी जन्मिएपछि पनि प्रियंकाले पेज ३ गसिपमा छाइरहने सम्भावना देखाएकी छन् ।उनले आजै छोरीको नाममा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट खोलिदिइन् । इन्स्टाग्रामको नियमअनुसार १३ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले अकाउन्ट खोल्न पाइँदैन । यस्तोमा अभिभावक अरु कसैले यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर बायोमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रियंका–आयूष्मानले छोरीको अकाउन्ट आफूहरुले ह्यान्डल गर्ने बायोमा जनाएका छन् । गर्भवती हुनासाथै प्रियंका र आयूष्मानले छोरी जन्मने भन्दै ‘आयांका’ नामाकरण गरिसकेका थिए । छोरीका लागि दर्जनौं लुगाफाटा र खेलौना किनेर प्रियंकाले दराजमा सजाइसकेकी छन्